Malunga nathi - iZhejiang Baolai Group Co., Ltd.
Zhejiang Baolai Group Co., Ltd. (Igama lebrand: iGlazzy) ineglasi eyodwa kwimveliso yeglasi ngaphezulu kweminyaka engama-20. Inkampani yethu yenye inkampani ephambili kwishishini eyewear e-China, izinze e China indawo enkulu ukwenziwa eyewear - Taizhou Linhai.
Singavelisa naluphi na uhlobo lwamehlo kuphela ngaphandle kweelensi zonxibelelwano, eyona mveliso yethu iphambili ibandakanya: iiglasi zelanga, isakhelo seOptical, iiglasi zokufunda, iiglasi zemidlalo, iiglasi zeAcetate, njl. , ILipton njlnjl .. Singabonisa lonke uphicotho-zincwadi olusisihlobo sereferensi yakho ukuba ufuna njalo. Kwiminyaka engama-8 yokuthumela kwamanye amazwe amava, siye sakha isebe lokuthengisa elomeleleyo nelinobuchule, iqela loyilo elinobuchule, iqela leQC / QA elinoxanduva.
Sonke sinenjongo enye: ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo kubo bonke abathengi bethu abathandekayo. Ngoluhlu olubanzi lomgangatho ophezulu, iimveliso ezinamaxabiso afanelekileyo kunye noyilo lwesitayile, sinokukhuphisana okunamandla kwintengiso yethu. Sijolise kulawulo lomgangatho, iinkonzo zabathengi, ekuhanjisweni kwexesha kwaye sithathe ezi zinto njengezona zinto ziphambili zokwandisa amandla okhuphiswano kwintengiso zehlabathi. Ukwenza ixabiso eliphezulu kubathengi bethu kukuqhubeka kwethu rhoqo. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu. Siyathemba ukuba sinokuba nethuba lokwakha ubudlelwane beshishini kunye nawe kunye nokuseka intsebenziswano yexesha elide.